Shiinaha KingKong 3 Tattoo Mashiinka Kaydadka Mashiinka & Warshadda | MOLONG
Mashiinka jarmalka ah ee Jarmalka
Xawaaraha Wareegga: 12V 11000rpm
480 Xuddunta weyn
AIR FREIGHT: Habka ugu fiican ee loo raro shixnadaha dhexdhexaadka ah (in ka badan 100kg) ama marka waqtigaagu uusan sugi karin xamuulka badda. Qiimaha xamuulka hawada wuxuu ku saleysan yahay miisaanka iyo mugga. Waxyaalaha qaarkood sida xumbada waxay qaadataa boosas fara badan laakiin waa mid aad u fudud oo waxyaabaha qaar sida birta ayaa aad u culus laakiin waxay qaadataa meel yar. Kharashka xamuulka ee rasmiga ahi miisaan iyo mug ayuu u qaadanayaa labadaba. Guud ahaan, waqtiga safarka tareenka waa inuusan ka badnaan 10 maalmood oo shaqo caadi ahaanna waa kaliya 3-5 maalmood. (Fadlan la soco in xamuulka hawada uu yahay kaliya geynta garoonkaaga kuugu dhow. Wakiilkaaga xamuulka wuxuu wali u baahan doonaa inuu maareeyo nadiifinta kastamka iyo gaadiidka gudaha u gala bakhaarkaaga). Air Waybill (AWB) waa caddeyn dukumenti ah oo ku saabsan heshiiska u dhexeeya EM iyo shirkadda side. AWB waxaa lagu geyn doonaa xamuulka hawada waxayna u adeegtaa sidii rasiid rasiid ah, qaab qaansheegasho, shahaadada caymiska, iyo dukumiinti looga baahan yahay nadiifinta kastamka.
BADDA XADGUDUB: Habka ugu jaban uguna qiimaha badan uguna muhiimsan ee habka dhoofinta iyo soo dejinta ganacsiyada adduunka. Waxaan ka diyaarin karnaa maraakiibteena, dekedda ugu dhow ee shanghai, illaa dekedda kuugu dhow, ama dhammaan xarumahaaga (oo aan ku jirin canshuuraha iyo canshuuraha). Waxaan rari karnaa xamuul buuxa oo xamuul ah (FCL) ama ka yar xamuul buuxa oo konteenarro ah (LCL). Qiimaha weelka 40 is kaliya wuxuu kudhowaad 50% ka badan yahay 20 ′ weel oo 40 ′ HQ wuxuu u dhigmaa qiimaha la mid ah weelka 40 ′ GP. Max load waa qiyaastii 20 tan. Macaamiishayada iibku waxay kugula talin karaan talooyinka maraakiibta. Tusaale ahaan, haddii aad ka yar tahay 8cmb waxaan kugula talin doonnaa inaad kaliya dirto LCL. Haddii aad ka weyn tahay 15cbm waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto inaad iibsato in ka badan si aad u buuxiso weel buuxa maadaama habka ugu jaban uu noqon doono in markab la raaco FCL. Miisaanka / mugga ugu yar ee la iibsan karo ee LCL waa 1 cbm ama 1 tan, sidaa darteed amarrada ka hooseeya 100kg waxaan soo jeedin karnaa xamuul hawo ama xitaa xawil xamuul.
Gaadiidka badda aad ayuu u gaabiyaa sidaa darteed qorshaynta saxda ahi waa furaha. Waxaan soo jeedinaynaa in la dhigo dalabyada 3 bilood ka hor. Tusaale ahaan. Haddii aad u baahato alaabtaada inay diyaar u tahay xilliga Kirismaska, waxaad si fiican u dhigeysaa amarkaaga Ogosto ama xitaa kahor. Waxaad sidoo kale u kala qaybin kartaa rarkaaga 2 qaybood: boqolkiiba in yar oo hawo ah, nasasho badda.
Nadiifinta iyo qaadista ama keenida amarkaaga waxaa samayn kara iibsadaha ama dulaalaha kastamka. Waxaad noqon kartaa meel lagu geyn karo dukumiintiyada gelitaanka ee kastamka, u diyaarso bixinta wixii waajibaad ah, canshuuraha iyo khidmadaha kale. Waxay kuxirantahay wadanka, way heli kartaa khiyaano; markaa waxaan kuu soo jeedinaynaa adeegsiga dulaaliinta caadada ah caawimaad. Waxaan ku siin doonnaa Biil-socod, Qaansheeg, Shahaadada Asalka, iyo Liiska Xirmooyinka. Had iyo jeer hubi si aad u hubiso in macluumaadka oo dhammeystiran oo sax ah u gudbi dillaalkaaga kastamka sida ugu dhakhsaha badan.
Hore: Tilmaamaha La tuurayo Balaastikadda Caddaan Dufan
Xiga: Tattoo Istiraatiiji Dhererka Isbedelka Dhererka Gacanta Madoow
5PCS & 3PCS Duubaanka Forceps Tattoo Pierci ...
1pc Tattoo Kuusha Ball Grabber 4 Talo ahama S ...